トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ngebuhle nebubi kuhloswe imodeli ingane pachinko eshintsha
Ngisho pachinko emakhazeni ukuthi hamba kini, ngicabanga ukuthi kukhona njalo muhle kakhulu hhayi imodeli ezincane zokusebenzela. Ikakhulukazi, noma sezibekwe maqondana esitolo emhlane, inombolo ezimbalwa kakhulu onobuhle kunjalo. Njengoba ikhasimende, HTE kodwa ezincane uyisibonelo, kodwa kukhona Yebo nako nemibi, kukhona izinzuzo. Ngakho, ngokuya sokukhomba imodeli ezincane, izinzuzo kanye nebubi, sizobheka ukuthi izinto.
Okokuqala njengoba nokubi ngoba ulwazi imodeli incane, ukuthi ukukhiqizwa okunjalo futhi musa bheka empeleni hit alwaziwa. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza akunakwenzeka ukuba convergence ematfuba ongaphakeme, kungase kube nzima ukuhlola igagasi ROM.
onobuhle ezincane, kakhulu noma cha ethandwa, inani onobuhle oludala eqile phezu isikhathi kusukela ukudayiswa. Ukuze benze kanjalo, nathi kukhombisa ulwazi efana ukukhiqizwa noma ukuma kolwazi ibhalansi siba sincane kakhulu. Lapho ekhuluma kanjani baqoqe ukwenza, kuyohamba uqinisekise empeleni kuphela hit ngokwakho.
ishayise kancane, ngoba angazi kakhulu, uzodinga isinqumo elithile utshalomali. Utshalomali kokuqala ulwazi bahlangana, iqiniso lokuthi kumelwe icatshangelwe. Ngaphezu kwalokho, njalo esimeni lapho kungekho ukugijima libhekene imodeli ezincane. Iqiniso lokuthi ukusebenza akuyona, ngayinye amagagasi okuhle futhi amagagasi okubi kungenzeka stagnate, ngesikhathi amagagasi ezimbi, kwakuzothatha isikhathi Kuhlanganiswa kuze kube jackpot okungenzeka.
wasithatha imodeli ezincane, uma ukwandisa ematfuba ngokuwina, utshalomali nomsebenzi ulwazi oluqoqwe futhi uzodinga ulwazi ukufunda amagagasi.
Ngo kuba inzuzo ephambene, ukuhlinzwa ukuze nokuthi avame hit yesikhulumi okuhloswe cha, ngoba omunye umuntu hhayi wamshaya ngempela, uma umuntu ongonga e ngezinga elithile self ngezimali, ukufunda igagasi ngalinye wukuthi lula. Ihlala isebenza is onobuhle ezincane ababuthakathaka, ayanda amathuba ukuthi play kwenziwe ngesikhathi cishe.
kuleli cala, ezifana uthatha idatha ukugxila olulodwa, ngoba akulona kakhulu hit omunye umuntu, ngamunye Waves futhi ukuma isikhathi convergence isiba kulula ukubona ngokusebenzisa. Woza hit esikhathini lokhu kakhulu ngokuvamile, ezifana ematfuba kuphezulu, yokuthi kwenkathi ngayinye kulula ukufunda, izinzuzo esiphezulu.
Futhi, onobuhle ezincane ezinjalo, uyophinde abe izinto eziningi ukuze sisetshenziswe njengesigungu sokufaka imodeli mcimbi. Nokho, kusukela ngo-ezimweni eziningi ukwandisa ukusebenza kuphela, sicela ubheke izinzipho. Okuningi esidlule ngesonto omunye idatha, uma kukhona indlela yokwazi ulwazi wenkokhelo, ingabe yini kube ngcono ukuze uqinisekise.